Muuse Biixi oo ka deyriyay abaarta Soomaaliland | KEYDMEDIA ONLINE
Muuse Biixi oo ka deyriyay abaarta Soomaaliland
Madaxweynaha maamulka Soomaaliland, Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta jeediyay qudbo dhinacyo badan badan taabaneysa oo ku saabsan xaaladdaha guud ee Soomaaliland.
HARGEYSA, Soomaaliland – Madaxweyne Muus Biixi oo ka hadlayay munaasabad ay soo qaban qaabisay shirkadda Somtel, kuna daah fureysay Saamiyo cusub ayaa ka hadlay arrimo la xariira cudurka saf marka ah ee COVID19, tallaalka la geeyay Hargeysa, abaaraha, sara u kaca shidalka iyo qodobo kale.
Madaxweynaha Soomaaliland, wuxuu cod dheer ku sheegay in abaar baahsan ay ku jirto gobollada Waqooyi ee Soomaaliya, wuxuuna sheegay loo baahan yahay gurmad degdeg ah.
“In ka badan 110,000, boqol iyo toban kun, oo qoys ayaa u baahan gargaar degdeg ah, in ka badan %60 reer guuraagu waa geeddi waxayna u baahan yihiin in biyo la gaarsiiyo, barkadihii waa gureen daaqina waa dhamaaday” .ayuu yiri Muuse Biixi.
Wuxuu xusay qiima korarka ku yimid Shidaalka degaannada Soomaaliland, wuxuuna u sababeeyay, qiima kac guud oo dunida oo dhan ka jira, iyo saameynta cudurka saf marka ah ee Coronavirus.
Muuse, wuxuu caddeeyay in COVID19 uu si xowli ah u kordhay Saddex-dii todobaad ee la soo dhaafay, wuxuuna ku baaqay in dadku qaataan tallaalka cudurka oo la geeyay Hargeysa.